Amaqhekeza e-domain yoluntu alindele wena kwiMyuziyam yedijithali | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngethamsanqa ngoku sinezinye iindlela zokufikelela kumgangatho wemultimedia yedijithali ekumgangatho ophezulu inento yokwenza nokuhlekisa okanye ukuhlekisa yobomi bonke. Iitafile, ii-smartphones kunye nabafundayo basivumela ukuba sibenakho ukubakho kwizixhobo zethu ngaphambi kwamanani amatsha weqhawe lethu, kunye nezo ngokuqinisekileyo ootatomkhulu noomakhulu bethu babezilandela kumashumi eminyaka eyadlulayo.
Zizo ezo zihlekisi kunye nokuhlekisa okuqokelelwa liZiko loLondolozo lweMbali yedijithali, a ngokukodwa kwiwebhusayithi ekwi-intanethi ngokuba neziqwengana ezihlekisayo ezazisetyenziswa ngumntu omdala endlwini. Inyathelo elinomdla kakhulu kwaye lona ngokwalo lisebenzisa lonke inani elikhulu leehlaya eliye laba yindawo yoluntu ngokubanzi ngokomthetho waseUnited States.
Ke nayiphi na iicomics epapashwe ngaphambi ko-1959 inokufumaneka kwiMyuziyam yedijithali. Iwebhsayithi enakho ube ngumthombo wokhuthazo Umxholo okwinqanaba eliphezulu oqulathiweyo, kuba akukho lula ukufikelela kwii-comics ezivela kwamanye amashumi eminyaka kwaye apha ziqokelelwa kuzo zonke iintlobo zengqokelela.
Ikwangumthombo okhethekileyo kwabo baqala ukufunda zonke iintlobo zoqeqesho ezinento yokwenza nokuzoba, kuba ndikhumbula kakuhle indlela esikhuthazwe ngayo ukuba sizobe ezona zinto sizifumene kuzo zonke iintlobo zeemagazini. Ke ukuba nazo zonke iintlobo zeekhathuni ezibonisa ezo comics nazo zonke iintlobo zemixholo asethi engenakuthelekiswa nanto.
Konke okufuneka ukwenze ukukhuphela ii-comics yenza iakhawunti Ukuze udlulisele kwi-25MB ezinye zinobunzima kwaye ziya kukubonelela ngazo zonke iintlobo zokuzonwabisa. Ewe bakwisiNgesi. Ukuba sele ukhangele ezinye zangoku ungaphoswa olu khetho lomlingane wam uFran Marín.
Ukufikelela ukusuka apha Imyuziyam yedijithali yamahlaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Imyuziyam yedijithali ye-Comic yiwebhusayithi ekhethekileyo apho unokufumana khona ii-comics zommandla woluntu
Ipeyinti yeoyile kaIstván Sándorfi